Rivo Rakotovao : « Tsy matahotra ny fangaraharahana ny HVM » -
AccueilSongandinaRivo Rakotovao : « Tsy matahotra ny fangaraharahana ny HVM »
06/04/2018 admintriatra Songandina 0
Nosokafana tmin’ny fomba ôfisialy omaly ny fivoriana tsy ara-potoana fahefatra teny amin’ny Antenimieran-doholona. Tonga nanotrona izany ny mpikambana teo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, tamin’ny mpanao gazety fa tsy matahotra ny fangaraharahana velively ny eo anivon’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM.
Notsindrian’ity filoha nasionalin’ny antoko HVM sady laharana voalohany eo anivon’ny Lapan’Anosikely ity fa tsy tokony ho fahanana sy vokisana lainga ny vahoaka. Raha ny mahakasika ny lalàm-pifidianana mantsy, dia nohazavainy tsara fa tsy an’ny antoko HVM velively iny fa natao ho an’ny rehetra. “Raha toa ka tsy manao ilay “bulletin n°2 ve dia lazaina fa an’ny HVM izany satria matahotra ny mangarahara ny sasany? Izahay ato amin’ny HVM tsy matahotra ny mangarahara izany. Mitady ny mangarahara rahateo ny HVM”, hoy i Rivo Rakotovao.
Adihevitra no natao tamin’iny lalàm-pifidianana iny. Nambarany fa nisy 40 ny fanitsiana natao tamin’izany teny anivon’ny Antenimieram-pirenena. “Fa ahoana moa no ilazan-dry zareo fa jadona izany? Efa 40 tamin’ny 82 no noraisina koa mitady inona indray izany izy ireo. Rehefa ry zareo no manao azy dia tsy jadona fa rehefa iza no manao dia lazaina fa jadona”, hoy hatrany ny filoha nasionalin’ny antoko HVM.
Mikasika ny fampihavanam-pirenena indray, nambarany fa ilaina izany ho fanatsarana hatrany ny fiainam-pirenena, saingy tsy midika akory izany fa ajanona avokoa ny raharaham-pirenena. “Ahoana moa no tokony hanajanonana ny raharaham-pirenena fa hotanterahina ny fampihavanam-pirenena? Tsy hisy raharaha vanona sy fampandrosoana izany mihitsy eto raha toa ka hajanona avokoa ny raharaham-pirenena rehetra”, hoy izy.
Raharaha Ravatomanga : Niampy 44,8 Miliara indray
Mitohy hatrany ny figiazan’ny PNF (Parquet National Financier) ireo trano be maro an’i Mamy Ravatomanga any Frantsa. Ny AGRASC (Agence de Gestion et Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués) moa no misahana ny fitantanana ireo ...Tohiny